Umgaqo wabucala Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
1 Umgaqo-nkqubo wobumfihlo
1.1 Ukuthumela nokurekhoda idatha ngokubanzi
2 Ukuchaneka kunye nokunyaniseka kwedatha
3 Ukusetyenziswa kwamalungelo okufikelela, ukulungiswa kwakhona, ukucinywa okanye inkcaso
4 Ukwamkelwa kunye nemvume
5 Utshintsho lwalo mgaqo-nkqubo wabucala
6 Imeyile yokuthengisa
Ukuthumela idatha yobuqu kule webhusayithi kunyanzelekile ukuba unxibelelane, uphawule, ubhalise kwi-blog ekwi-intanethi, uqulunqe iinkonzo eziboniswe kule webhusayithi kwaye uthenge iincwadi kwifomathi yedijithali.
I-discover.online iya kuqokelela iiNkcukacha zaBasebenzisi zaBasebenzisi, ngeefom ezikwi-intanethi, nge-Intanethi. Idatha yobuqu eqokelelweyo, kuxhomekeke kwimeko nganye, inokuba, phakathi kwezinye: igama, ifani, i-imeyile kunye nonxibelelwano lokufikelela. Kwangokunjalo, kwimeko yeenkonzo zekhontrakthi, ukuthenga iincwadi kunye nentengiso, ndiza kucela kuMsebenzisi idatha ethile yebhanki okanye yentlawulo.
Iinkqubo zokufaka ulwazi lomntu olusetyenziswa yiDisco.online :
Abasebenzisi banako ungabhalisi nangaliphi na ixesha zeenkonzo ezibonelelwa kukufumanisa.ku-Intanethi kwincwadana efanayo.
I-Discover.online ikwafunda nokukhethwa ngabasebenzisi bayo, iimpawu zabo zedemokhrasi, iipateni zabo zendlela, kunye nolunye ulwazi ngokudibeneyo ukuze baqonde ngcono ukuba ngubani abaphulaphuli bethu kunye nento abayifunayo. Ukulandelela ukhetho lwabasebenzisi bethu kukwasinceda ukuba sikubonise ezona ntengiso zichaphazelekayo.
Umsebenzisi kwaye, ngokubanzi, nawuphina umntu wendalo okanye wezomthetho, unokuseka ikhonkco okanye isixhobo soqhakamshelwano lobuchwephesha (umzekelo, amakhonkco okanye amaqhosha) kwiwebhusayithi yabo ukuze afumanise. Ukusekwa kwe-Hyperlink akuthethi nakweyiphi na imeko ubukho bobudlelwane phakathi kwe-discover.online kunye nomnini wesayithi okanye iphepha lewebhu apho i-Hyperlink isungulwe khona, okanye ukwamkelwa okanye ukuvunywa yi-discover. Kwi-intanethi yayo okanye iinkonzo. Ngayiphi na imeko, Discover.online unelungelo lokuthintela okanye ukukhubaza nayiphi na ikhonkco kwiWebhusayithi nangaliphi na ixesha.
Umsebenzisi uqinisekisa ukuba idatha yobuqu ebonelelwe kwiifom ezahlukeneyo iyinyani, inyanzelekile ukuba inxibelelane naluphi na uguquko lwayo. Ngokunjalo, uMsebenzisi uqinisekisa ukuba lonke ulwazi olunikiweyo luyahambelana nemeko yabo yokwenyani, ukuba ihlaziyiwe kwaye ichanekile. Ukongeza, uMsebenzisi uthembisa ukugcina idatha yabo ihlaziywa ngalo lonke ixesha, enoxanduva lokungachaneki okanye ubuxoki bedatha ebonelelweyo kunye nomonakalo onokubangelwa koku kwi-Intanethi ye-Servicios Telemáticos SL njengomnini wewebhusayithi ufumanise kwi-intanethi.
Unokwalathisa unxibelelwano lwakho kwaye usebenzise amalungelo ukufikelela, ukulungiswa kwakhona, ukucinywa kunye nenkcaso Ngokuthunyelwa ngeposi eC / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 -Albolote (eGranada) okanye nge-imeyile: info (at) discover.online kunye nobungqina obusemthethweni, njengefotokopi ye-DNI okanye efanayo, ebonisa kumxholo othi "UKHUSELEKO LWEDATHA".
Umsebenzisi uxele ukuba wazisiwe ngemiqathango yokhuseleko lwedatha yobuqu, ukwamkela kunye nokuvuma unyango lwayo yi-Online Servicios Telemáticos SL ngendlela nangeenjongo ezichaziweyo isaziso esisemthethweni.
Ngokuhambelana ne-LSSICE, i-Intanethi i-Servicios Telemáticos SL ayenzi zenzo ze-SPAM, ngenxa yoko ayithumeli ii-imeyile zorhwebo ezingakhange zicelwe ngaphambili okanye zigunyaziswe nguMsebenzisi, ngamanye amaxesha, zinokuthumela ukunyuselwa kunye nezibonelelo ezithile kunye amaqela esithathu, kuphela kwiimeko apho unegunya labamkeli. Ngenxa yoko, kwifomu nganye ebonelelwe kwiWebhusayithi, uMsebenzisi unakho ukunika imvume yokufumana "iNcwadana yam", ngaphandle kolwazi lwentengiso oluceliweyo. Unokurhoxisa umrhumo wakho ngokuzenzekelayo kwiincwadana ezifanayo.